Palette Omume maka Usoro nhazi na Photoshop
Software Ihe ọsịse
Ịmepụta ihe maka nhazi usoro n'ime Photoshop
Omume bụ ihe dị ike na Photoshop nke nwere ike ịchekwa oge gị site n'ịrụ ọrụ ndị ọzọ maka gị na-akpaghị aka, yana maka ịhazi nhazi ọtụtụ ihe oyiyi mgbe ịkwesịrị itinye otu usoro nke nzọụkwụ na ọtụtụ ihe oyiyi.
Na nkuzi a, anyị ga-egosi gị otu esi ede ndekọ dị mfe maka ịmeghachi ihe setịpụrụ ihe oyiyi ma emesia m ga-egosi gị otu esi eji ya na iwu batrị maka ịhazi ọtụtụ ihe oyiyi. Ọ bụ ezie na anyị ga-ekepụta ihe dị mfe na nkuzi a, ozugbo ị maara usoro ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta ihe dịka mgbagwoju anya dị ka ịchọrọ.
01 nke 07
Edere nkuzi a na iji Photoshop CS3. Ọ bụrụ na ị na-eji Photoshop CC, pịa bọtịnụ Fly Out n'akụkụ akụ. Akụ ahụ na-agbada menu.
Iji dekọọ ihe, ị ga-achọ iji palette omume. Ọ bụrụ na emeghị palette adịghị anya na ihuenyo gị, mepee ya site na ịga na Ohere -> Omume .
Rịba ama akụ menu na nri aka nri nke palette. Akụ a na-emepụta ihe omume egosipụtara ebe a.
02 nke 07
Mepụta Setet ihe
Pịa akụ ka ịwelite menu ma họrọ New Set . Ihe omume nwere ike inwe ọtụtụ omume. Ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị mepụtara omume n'ihu, ọ bụ ezi echiche ịchekwa ihe omume gị niile na setịpụrụ.
Nye ihe ohuru ohuru Mee ka aha, wee pịa OK.
03 nke 07
Aha Aha Ọhụụ Gị
Ọzọ, họrọ New Action site na Omume palette menu. Nye ihe ị na-eme nkọwa aha, dị ka "Ihe oyiyi dabara na 800x600 " maka ihe nlereanya anyị. Mgbe ịpịrị Dekọọ, ị ga-ahụ ntụpọ ọbara ọbara na omume palette igosi na ị na-edekọ.
04 nke 07
Dekọọ Iwu maka Omume gị
Gaa na Njikwa> Megharia> Fit Image ma tinye 800 maka obosara na 600 maka elu. Ana m eji iwu a eme ihe kama imeghachite iwu ahụ, n'ihi na ọ ga-ahụ na ọ dịghị oyiyi dị ogologo karịa pikselụ 800 ma ọ bụ karịa karịa 600 pixels, ọbụlagodi mgbe akụkụ ahụ adịghị adaba.
05 nke 07
Dekọọ Save dị ka iwu
Na-esote, gaa File> Chekwa ka . Họrọ JPEG maka usoro nchekwa ma jide n'aka " Dị ka Detuo " na-enyocha nhọrọ nhọrọ. Pịa OK, mgbe ahụ JPEG Nhọrọ dialog ga-apụta. Họrọ mma gị na nhọrọ nhazi, wee pịa OK ọzọ ịchekwaa faịlụ ahụ.
06 nke 07
N'ikpeazụ, gaa na paịtị Omume wee pịa bọtịnụ mkpọchi iji kwụsị ndekọ.
Ugbu a ị nwere ihe! Na nzọụkwụ na-esonụ, Aga m egosi gị otu esi eji ya na nhazi nhazi.
07 nke 07
Debe nhazi usoro
Iji mee ihe na ọnọdụ batch, gaa na Njikwa -> Gbanye -> Ibu . Ị ga-ahụ igbe nke egosiri n'ebe a.
Na igbe, họrọ setị na ihe ị mere naanị n'okpuru mpaghara "Play".
Maka isi iyi, họrọ nchekwa wee pịa "Họrọ ..." iji gaa na nchekwa ahụ nke nwere ihe oyiyi ịchọrọ ịhazi.
Maka ebe ị na-aga, họrọ Nchekwa wee gaa na nchekwa dị iche iche maka Photoshop iji weputa ihe oyiyi ndị a gbanweghachiri.
Rịba ama: Ị nwere ike ịhọrọ "Ọ dịghị onye" ma ọ bụ "Save and Close" iji nweta Photoshop zọpụta ha na folda isi, ma anyị anaghị enye ya ndụmọdụ. Ọ dị mfe ịmehie ihe ma degharịa faịlụ mbụ gị. N'otu oge, ị maara na usoro nhazi gị na-aga nke ọma, ị nwere ike ịkwaga faịlụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Jide n'aka na ị ga-ahụ igbe maka Ọrụ Ntugharị "Zọpụta Dị ka" Iwu ka ewezuga faịlụ ọhụrụ gị n'egbughị oge. (Ị nwere ike ịgụtakwu banyere nhọrọ a na Enyemaka Photoshop n'okpuru arụmọrụ akụrụngwa> Nhazi ọkwa nke faịlụ> Nhọrọ batch na ntanetị .)
Na ngalaba na-akpọ aha faịlụ, ị nwere ike ịhọrọ otú ịchọrọ ka a kpọọ faịlụ gị. Na nseta ihuenyo, dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na- agbakwunye " -800x600 " na aha akwụkwọ mbụ. Ịnwere ike iji mpempe akwụkwọ adọtara ka ịhọrọ data akọwapụtara maka ubi ndị a ma ọ bụ pịnye ozugbo n'ime ubi.
Maka njehie, ị nwere ike ịnwe nkwụsị usoro ma ọ bụ mepụta faịlụ ndekọ nke njehie.
Mgbe ịmechara nhọrọ gị, pịa OK, wee nọdụ ala ma lelee ka Photoshop na-arụ ọrụ niile maka gị! Ozugbo i nwere otu ihe, ị makwaara otu esi eji iwu ahụ, ị ​​nwere ike iji ya n'oge ọ bụla ị nwere ọtụtụ foto ị ga-achọ iweghachi. Ịnwere ike ime ihe ọzọ iji gbanwee folda nke ihe oyiyi ma ọ bụ mee nhazi ọ bụla ọzọ nke ị na-ejikarị aka eme.
Kedu ka m ga - esi mepụta akwụkwọ akụkọ ọma?
Ịghọta Ihe Vector na Bitmap Images
Otu esi eji Adobe Bridge CC 2017
Kedu ihe nkwụsị ngwá ahịa?
Otu esi mata akwukwọ eji ede maka asambodo onyinye onyinye ulo
Atụmatụ maka iji nkwụnye ọkụ iji mee ihe ngosi maka ịkụcha ihe
Mụta Banyere Ụdị Pọpịpụta Echiche Pụrụ Iche
Ụgha sitere na Borderlands & Life bụ ihe ọjọọ
Otu esi agbanwe aha gị na Facebook
A Nduzi na Egwuregwu Egwuregwu Kasị Mma na PC
Ụkpụrụ Okwu Microsoft maka Business
Esi mepee Atụmatụ Marketing Blog
Ụlọ ọrụ gị na ụlọ ọrụ gị ọ nyere TiVo?
Ego Ole Ka iPhone 4 Na-eri?
Ihe Nlereanya Na - eji Iwu "gunzip"
Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ na Ihichapụ GMX Mail Account
Ndị 8 Printer foto kachasị mma ịzụta na 2018
Mee ka nkwụsị ahụ dị mgbe nile na Ubuntu na Guake
Otu esi eme ka ihu igwe ihuenyo zuru oke na IE9
Mail2web-Web Access na POP na IMAP Email Service
Terabytes, Gigabytes, & Petabytes: Olee Nnukwu Ha?
Otu esi enweta Windows Live Hotmail kpochapụ igbe mbata gị
Na-agbakwụnye Images gaa na ibe weebụ
Iwepu iTunes n'ebughị egwu gị
EVGA GeForce GTX 1060 Egwuregwu 6GB
Ụzọ iji ghọta ụbọchị na Oge na nkụnye eji ederede Email
Gears nke Agha COG Tags Ebe (Xbox 360)